योजना आयोगको सपना ठूलो, प्रगतिमा दुलो ! - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७५, बुधबार १८:३८
काठमाडौं । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी वि.सं २०१३ मा शुरु भएको हो । यसबीचमा ९ वटा पञ्चवर्षीय र ५ वटा त्रिवर्षीय आवधिक योजना लागू भइरहेका छन् । योजनाबद्ध विकासको यतिका लामो कालखण्ड पारगरेको नेपालले उपलब्धि र प्रगति भने जवर्रजस्त तरिकाले पाउँदै आएको छ । उद्देश्य र सपना ठुला भए पनि कार्यान्वयन र प्रगतिमा भने देखिन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औँ योजनाको मस्यौदा–आधारपत्रले वि.सं २०९९ सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन आयोगले आगामी २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहितको पञ्चवर्षीय योजना तयार गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि २०८०-८१ सम्म कार्यान्वयन हुने उक्त योजनाको मस्यौदा आज आयोगले सरोकारवाला पक्षसँग प्रस्तुत गरी परामर्श लिएको छ ।
वि.सं २१०० सम्ममा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलरमा पु¥याउने दीर्घकालीन सोचसहितको योजनामा उल्लेख छ । हाल मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर छ भने कूल ग्राहस्थ उत्पादन रु ३० खर्ब सात अर्ब छ । गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २१ दशमलव ६ प्रतिशत छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले योजनाले समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवनसहितको समाजवादोन्मुख÷लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने आधार तयार गर्ने सङ्कल्पसहित विभिन्न तीन राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको बताए ।
परामर्शमा सङ्घीय संसद्मा सांसद्, पूर्वमन्त्री, विज्ञ, अधिकारकर्मी र क्षेत्रगत निकाय र संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् । भएका योजना-बजेटको सही कार्यान्वयन र सुशासन कायम नभएको अवस्थामा नयाँ योजना कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्न सहभागीले उठाएका छन् ।
सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले विगतकै परम्परागत शैलीमा योजना अघि सारिएकाले समृद्धिको सन्तुलित विकासका आधार यसले तय नगर्ने टिप्पणी गरे । अर्का सांसद् गौरीशङ्कर चौधरीले प्रदेश नं २ को गरीबी घटाउने स्पष्ट सोच ल्याउन माग गरे ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले चुरे क्षेत्रमा मानवरहित बस्ती उठाएर चुरेको संरक्षण गर्ने सोच सफल नहुने तर्क राखे । छ वटा विषयगत समूहको छलफल र प्रस्तुतिपछि आयोगले मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नेछ ।